Sezvaunotanga rwendo rwako rwekutengesa, zvakakosha kuti uzive
pamwe nemigumisiro yekutengesa kwe ECN, uye tiri pano kuzokubatsira.
Chii chaunoda kuziva kana uchitengesa Forex
Tsvaga izvi zvinyorwa zve forex uye uzvipe simba pachako pakuisa matanho anoziva
Dzidza kuti sei ECN iri nguva yemberi yeZimbabwe Exchange Markets.
Ndechipi musiyano pakati pemhando mbiri uye inobatsira ECN inounza kune vatengesi?
Ziva ruzivo rwemari yakakosha pairi uye maitiro avo.
Kunzwisisa rollover kunokosha kuti kuverenga kwako kuve kwakarurama.
Dzidza rini apo kusvetuka kunoitika uye nenzira ipi zvingakanganisa kutengesa.
Sei zvakakosha kunyatsonzwisisa chirevo chemugumo apo unotengesa Forex?
Dzidza kuti ungabudirira sei kuita bhizinesi neFXCC uye unonzwisisa zvigadzirwa zvedu.
Kuvandudza kutengesa kwako nechisarudzo che forex ebooks, kupa hutungamiri nekunzwisisa kwemashoko makuru ekutengeserana
SHONA ZVOSE eBOOKS
Vhura FREE ECN Account Nhasi! Tanga kutengeserana neBrker paMukati Wako!
Chii chinotungamirira pamusika? Ita ruzivo nezvezviitiko zvezvemupfumi zvepasi rese zvinopinda musangano wemisika.
Nhamba yakawanda yepamusoro yakashandiswa mune ye forex centre yezvidzidzo
kuve nechokwadi kuti ine chikonzero chekusiyana uye kuwedzera vatengi vedu ruzivo.
- Forex Basics - Forex Kuongorora - Forex Isu
Forex Trading Trading Zvidzidzo
- Makambani - Pakati
- Enda kuGenesis
Wana mhinduro dzemibvunzo inowanzobvunzwa pamusoro pebhizimisi remuenzaniso wekutengeserana kana kutengeserana.
Enda kune FAQ